Duuliye geeriyooday iyadoo diyaaradii uu waday ay hawada ku jirto | Saxil News Network
March 30, 2017 - Written by Cabdiqani Deeq
(Saxilnews)Duuuliye ayaa geeriyooday Arbacadii xilli uu waday diyaarad uu ka soo duuliyey Magaalada Dallas kuna wajahnayd Albuquerque ee New Mexico ee dalka Mareykanka, sida ay xaqiijisay shirkadda diyaaradaha ee American Airlines.
”Diyaarada ayaa si tartiib ah u soo caga dhigatay iyadoo aanay dhicin wax dhibaata ah, kadib waxa alabaabka kula kulmay kooxda gurmadka deg degga ah”, ayuu yiri afhayeenka.
Dhammaan rakaabkii saarna diyaaradda ayaa la sheegay inay bad qabaan. Duuliyaha geeriyooday waxaa magaciisa lagu sheegay William Grubbs .
Diyaarada waxa la wareegay oo dejiyay kaaliyaha duuliyihii geeriyooday.